Xaaladaha u dhimashada cudurka AIDS-ka oo ku batay dalalka Somalia, Sudan iyo Iran… – Hagaag.com
Xaaladaha u dhimashada cudurka AIDS-ka oo ku batay dalalka Somalia, Sudan iyo Iran…
Posted on 3 Maajo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaa korodhay u dhimashada cudurka AIDS-ka ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, Halka caalamka intiisii kale u jiheystay hoos u dhac ku yimid u dhimashada cudurka.
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), tirada dhimashada ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ayaa kor u kacday 274% intii u dhaxaysay sanadaha 2000 ilaa 2015. walow dhimashada caalamka intiisii kale ee AIDS-ka uu hoos u dhacay 27% isla mudadaasi.
Sannadkii 2016, dalalka ugu xun ee gobolka sida weyn ugu dhuftay cudurka AIDS-ka waxaa ka mid ahaa; Somalia oo ay u dhinteen cudurkaasi 1,700 qof, Sudan oo 3,000 oo qof ay u dhinteen, iyo Iran oo 4,000 oo qof ay u dhinteen cudurkan.
Al-Fanar Media ayaa sheegtey in dhimashada AIDS-ka ee dalalka Carabta ay aad ugu dhowdahay sababteeda iyada oo dadka khatarta ugu jiro in ay qaadeen cudurka HIV-ga oo aan ogoleyn inay sameeyaan baaritaano.
Tirada dadka qaba HIV-ga ayaa kor u kacaya, inkasta oo heerkiisa dhimashada uusan sii kordheynin. Hadana Intii u dhaxaysay 2001 iyo 2012, tirada dadka qaba cudurka AIDS-ka ayaa kordhay dadka ku nool Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika waxay kor u kaceen boqolkiiba 73, sida uu qabo Barnaamijka Wadajirka ee Qaramada Midoobay ee la dagaalanka cudurka HIV / AIDS (UNAIDS). Sannadka 2016 ayaa kororkaasi wuxuu ahaa 18,000 oo kiis oo cusub.
Qaybta ugu weyn ee korodhkaasi wuxuu ahaa Iran, Suudaan iyo Soomaaliya, halkaas oo 65 boqolkiiba cudurrada cusub ee gobolka laga diiwaangeliyey sannadka 2016, sida ay sheegtay Barnaamijka Wadajirka ee Qaramada Midoobay ee la dagaalanka cudurka HIV / AIDS (UNAIDS).
Sida laga soo xigtay xogta laga helay barnaamijka wadajirka ah ee Qaramada Midoobay ee la dagaalanka cudurka HIV / AIDS (UNAIDS), boqolkiiba 18 oo ah cudurrada cusub ee HIV ee Bariga Dhexe iyo waqooyiga Afrika ayaa lagu qaaday ragga u galmooda ragga kale. Qaybta ugu badan waa dadka ku shaqeysta howlaha galmada oo boqolkiiba 41 ah, halka dadka isticmaala daroogada ay ka yihiin boqolkiiba 28, iyaga oo isugu gudbiya irbadaha ay isku mudaan.